We Fight We Win. -- " More than Media ": NLD မှာ မူစလင်ဒုက္ခသည်များကို သွားရောက်ကူညီမှုများ ပြုလုပ်ပေး
NLD မှာ မူစလင်ဒုက္ခသည်များကို သွားရောက်ကူညီမှုများ ပြုလုပ်ပေး
မန္တလေးတိုင်း အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် မြို့နယ်များမှ ၂၃-၃-၂၀၁၃ရက်နေ့တွင် မိတ္ထီလာမြို့သို့ သွားရောက်ကာ အစားအသောက်၊ ဆေးဝါးနှင့်အလှူငွေများကို ဒုက္ခသည် စခန်းများသို့ ပေးအပ်လှူဒါန်းခဲ့ကြပါသည်။ အကူအညီတောင်းခံမှုကြောင့် ရပ်ကွက်အတွင်း ပိတ်မိနေသူများကိုလည်း သံဃာတော်များနှင့် အဖွဲ့ချုပ် လူငယ်များမှ ပူးပေါင်းကာ သွားရောက်ခေါ်ဆောင်ခဲ့ပြီး ခရိုင်အားကစားကွင်း အတွင်းသို့ ပို့ဆောင်ပေးခဲ့ပါသည်။ မိတ္ထီလာမြို့ အခြေအနေမှာ ယခုအခါ အေးချမ်းလျှက်ရှိပြီး ဒုက္ခသည်စခန်းတွင် အစားအသောက်၊ အ၀တ်အထည်နှင့် ဆေးဝါးများ လိုအပ်လျှက်ရှိပါသည်။ — မန္တလေးတိုင်းဒီ/ချုပ်မိထ္တီလာလူမှုကူညီရေးခရီးစဉ် (24 photos)
Like · · Share · 16 minutes ago ·
Should not be use only Musilm, there are everybody suffer because of someone create the problem and why NLD support only Musilm??
24 March 2013 at 02:14